နာဂစ်မတိုင်ခင် ရန်ကုန် vs နာဂစ်အပြီး ရန်ကုန် | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
နာဂစ်မတိုင်ခင် ရန်ကုန် vs နာဂစ်အပြီး ရန်ကုန်	Posted by mm thinker on June 7, 2008
Posted in: Experience, Nargis, Poem.	Tagged: Nargis, Poem.	ရန်ကုန်မှာ ရေးဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်အကြောင်း ကဗျာပါ။ စွဲလမ်းလွန်းလို့ ဖွဲ့တည်ရာမဂ္ဂဇင်းမှာ ခွင့်တောင်း ဖော်ပြဖူးတဲ့ ကိုငြိမ်းဇေဦးရဲ့ `တို့မြို့ကြီးရဲ့´နဲ့ တွဲပြီး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အရင်နဲ့ အခု ရန်ကုန်မှာ ဘာတွေထူးသွားလည်း ပေါ်စေချင်လို့ပါ။
ခုလေးတင် ဘီးစတိတ်တစ်ပွဲ စားခဲ့တဲ့ကောင်ကိုး။
← နာဂစ်မြစ်၊ နာဂစ်ကြိမ်စာ	သဘာဝကပ်ဘေးအလွန်နှင့် ကလေးများ၏ စိတ်ဒဏ်ရာ →	Pages	about